Milina Disc Durable Disc Organic & Compound Fertilizer Granulator Machine Miaraka amin'ireo mpamatsy tahan'ny granulation avo lenta sy orinasa | YiZheng
Inona no atao hoe Granulator Disc / Pan Organic & Compound Fertilizer?
Ity andiany an'ny kapila mangamanga dia miaraka am-bava telo manala, manamora ny famokarana mitohy, mampihena be ny hamafin'ny asa sy manatsara ny fahombiazan'ny asa. Ny reducer sy ny motera dia mampiasa fehin-kibo malefaka hanombohana tsara, hampihena ny herin'ny fiatraikany ary hanatsara ny fiainana serivisin'ireo fitaovana. Ny fanambanin'ny takelaka dia manamafy ny fomban'ny takelaka vy mamirapiratra, izay mateza ary tsy misy endrika mihintsy. Izy io dia fitaovana mety tsara amin'ny zezika biolojika sy zezika mitambatra, izay natao miaraka amina fotony matevina, mavesatra sy matanjaka, noho izany dia tsy misy tadim-by sy fikasana malama.
Ny haavon'ny lapoaly granulate dia azo ovaina hatramin'ny 35 ° ka hatramin'ny 50 °. Ny lapoaly dia mihodina amin'ny zoro iray miaraka amin'ny marindrano entin'ny motera amin'ny alàlan'ny reducer. Ny vovoka dia hiakatra miaraka amin'ny vilany mihodina eo ambanin'ny fikororohana eo anelanelan'ny vovoka sy ny lapoaly; etsy ankilany, ny vovoka dia hianjera ao ambanin'ny hery misintona. Mandritra izany fotoana izany, ny vovo-tany dia atosika any amin'ny sisin'ny vilany noho ny hery afovoany. Ireo vovoka vovoka dia mihodina anaty dian-tongotra iray ao anatin'ireto hery telo ireto. Tonga tsikelikely ny habe takiana aminy, avy eo safotra amin'ny sisin'ny vilany. Manana tombony ny tahan'ny granulate avo, granule fanamiana, tanjaka avo, fandidiana mora, fikojakojana mety, sns.
Fomba fanodinana zezika mitambatra amin'ny alàlan'ny fampiasanao Gran Organic & Compound Fertilizer Granulator
1.Fangaroana akora voajanahary: ny ura, ny nitrate amonium, ny amonium klôro, ny amonium sulphate, ny amonium phosphate (monoammonium phosphate, diammonium phosphate, ary ny whiting wharse, ca), potassium chloride, potassium sulfate ary akora hafa dia ampifanarahina amin'ny ampahany (araky ny fitakiana tsena sy ny manodidina ny valin'ny fitsapana).
Fangaro amin'ny fitaovana 2.Raw: ny fifangaroan'ny akora dia tokony afangaro hanatsarana ny fahombiazan'ny zezika amin'ny granules.
3.Granulation ny akora: ny akora aorian'ny fampifangaroana mitovy dia halefa any amin'ny granulator (granulator amponga rotary, na granulator mpanala fantsom-panafody samy azo ampiasaina eto).
Fanamainana 4.Granulation: ataovy ao amin'ny fanamainana ilay granulation, ary ho maina ny hamandoana ao anaty granules, ka hitombo ny tanjaky ny granulation ary mora ny mitahiry azy.
5.Fangatsiahana mangatsiaka: aorian'ny fanamainana, ny hafanan'ny granulation dia avo loatra ary mora simba ny granulation. Raha aorian'ny fampangatsiahana dia mora ny manangona entana mba hitehirizana sy hitaterana.
6. Fanasokajiana Particle: ireo sombin-javatra mangatsiaka nangatsiaka dia hasiana mari-pahaizana: ny poti-kazo tsy voamarina dia hotorotoroina sy haverina ho simba, ary ny vokatra mahay dia hovaina.
7.Finished film: ny vokatra mahay dia mifono hampitombo ny famirapiratany sy ny fihodinan'ny granules.
8. Famonosana ny vokatra vita: Ireo sombin-javatra efa nofonosina ilay horonantsary dia voatahiry ao amin'ilay toerana misy rivotra.
Endri-javatra amin'ny milina Disc / pan Organic & Compound Fertilizer Granulator Machine
1. Fahombiazana avo. Ny milina granulation boribory dia mandray ny rafitry ny arc boribory iray manontolo, ny tahan'ny granulation dia mety hahatratra mihoatra ny 95%.
2.Ny faran'ny takelaka granulation dia nohamafisin'ny takelaka vy maromaro, izay mateza ary tsy misy endrika mihitsy.
3. Ny lovia Granulator nilahatra tamin'ny vy fitaratra matanjaka, manohitra harafesina ary maharitra.
4. Ireo fitaovana akora dia manana fampiharana azo ampiharina. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana akora isan-karazany, toy ny zezika mitambatra, fanafody, indostria simika, famahanana, arina, metallurgy.
5. Fandidiana azo antoka sy vidiny ambany. Kely ny herin'ilay milina, ary azo ianteherana ny fandidiana; tsy misy fanariana fako mandritra ny fizotran'ny granulate manontolo, milamina ny fandidiana ary mety ny fikojakojana.
Disc / Pan Organic & Compound Fertilizer Granulator Display Video
Safidy modely Disc / Pan Organic & Compound Fertilizer Granulator
Haavon'ny sisiny (mm)
Teo aloha: Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator
Manaraka: Granulator zezika voajanahary karazana & fitambarana karazany vaovao